July 2020 - Vanoda Zvinhu
Kukwira Mukadzi wemunhu muGreenhoodPark
Kusvira Mukadzi wemunhu muGreenhoodPark Kusvirana Nyoro muPark nemukadzi wemunhu. Takasangana paWechat and and we got to chatting. Akanditi we can only be friends sezvo she was married. Ndakati hapana problem as i was also looking for friends. We exchanged numbers and kept on chatting paWhatsApp 6 months later…
Masviriro andakaita Patient yauya ku Surgery
Masviriro andakaita patient – Aifunga Kuti Ane Preggers Ndaive mu surgery ndobva kwapinda mudzimai aive around late twenties achisvisvina hake lollypop yeruvara rwe red. Ndakamutarisa achiuya kutable kwandaive ndigere achifamba zvinyoronyoro nemakumbo matsvuku anoyevedza akakwana, aiva murefu zviri pakati nepakati akavakwa zvinonwisa mvura zvekuti waiona panotangira hip kana…
Kukwirwa kwandakaitwa na tezvara Joni iyi yakanganisa dzimba dzakawanda. My husband akaenda kunotsvaga chouviri Joni ndokupedza makore 4 asina kumbodzoka. Aingofona nenguva dzirikure plus hapana mari yaaitumira kuti ini mukadzi wake nemwana tirarame kumusha Bikita kwataigara. Ndakazoedza kutengesawo madomasi pa road inoenda kwa Mutare kuti ndiraramise mhuri. Tezvara…
KUSVIRWA NYORO BABA MWANA VAKATARISA Hama dzangu hurombo hwakaipa, murume wangu akaporomora kubasa kwake zvokuti mhosva yacho yaitomuendesa kujere kwemakore plus basa raibva rapera ipapo. Sezvineiwo boss wake uyo aive gwere gwere akaronga kuita blackmail my husband so that vakabvuma zvaaida aidropa ma charges bamwana havachaende kujere plus…
Kusvira mavy muroja munyowani Ndini uyu zvangu ndichibva kubasa zuva rodoka iri Sartuday ..ndakasvika pamba kwedu kumadheu dheu ndokuwana pasina vanhu ,sezvinei ndokusvikopinda mushower ndokugeza zvangu ndakabva ndawacha pant rangu sebhachura so..mumwewo mukadzi aindida wekubasa akabva andisendera picture rebeche rake asina kupfeka achinditi enjoy your weknd..ndakabva ndaziva kuti…